Tsy ara-drariny izany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Tsy rariny izany
Tsy rariny izany!
Jesosy tsy nitondra sabatra, tsy lefona. Tsy nanana tafika izy aoriany. Ny fitaovam-piadiany ihany no vavany, ary ny hafatra nampitondrainy azy. Nataony tezitra be loatra ny olona ka te hamono azy izy ireo. Ny hafatra nampitainy dia tsy hoe tsy ho diso fotsiny, fa mampidi-doza. Nifamadika izany. Nandrahona ny fanakorontanana ny rafitry ny sosialy jiosy izany. Fa inona ny hafatra mety ho tezitra be amin'ireo manampahefana ara-pivavahana ka namono ny mpitondra azy ireo?
Ny eritreritra iray mety hanorisory ny mpitondra fivavahana dia hita ao amin'ny Matio 9:13: "Tonga hiantso ny mpanota aho fa tsy ny marina". Nanana vaovao tsara ho an'ny mpanota i Jesosy, saingy maro tamin'ireo nihevitra ny tenany ho tsara no nahita fa nitory vaovao ratsy i Jesosy. Jesosy dia nanasa ny mpivaro-tena sy mpamory hetra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy tian'ny lehilahy tsara izany. "Tsy rariny izany" hoy izy ireo. «Efa nahavita ezaka tsara izahay, mba ho tsara, nahoana izy ireo no tonga any amin'ny fanjakana nefa tsy nanao ezaka? Raha tsy voatery mijanona any ivelany ny mpanota, tsy rariny izany! »
Tsy mihoatra ny ara-drariny
Andriamanitra kosa dia tsy miangatra. Lehibe lavitra noho izay azontsika rehetra ny fahasoavany. Malala-tanana Andriamanitra, feno fahasoavana, feno famindram-po, feno fitiavana antsika, na dia tsy mendrika izany aza isika. Ny hafatra toy izany dia manelingelina ny manam-pahefana ara-pivavahana sy izay milaza fa manandrana bebe kokoa ianao, arakaraka ny ahatongavanao; raha manao tsara kokoa dia ho karama bebe kokoa ianao. Manaraka izany hafatra izany ny mpitondra fanjakana satria manamora ny antony manosika ny olona hanao ezaka, manao ny tsara, miaina amim-pahamarinana. Fa hoy i Jesosy: Tsy toa izany.
Raha mandavaka lavaka lalina ianao, raha miverimberina matetika, raha mpanota ratsy indrindra ianao, dia tsy mila mijanona eo amin'ny lavaka ianao mba ho voavonjy. Mamela anao fotsiny Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. Tsy mila mahazo izany ianao, Andriamanitra irery no manao izany. Minoa fotsiny ianao vao mino. Ny hany mba ataonao dia ny matoky an'Andriamanitra, raiso ny teniny momba izany: voavela ny helokanao an-tapitrisany.
Ny olona sasany dia mahita an'io karazana hafatra io toa tsy ratsy. "Jereo fa niezaka mafy aho hivoaka ny lavaka," hoy izy ireo: "ary saika ho faty aho. Ary ankehitriny hoy ianao tamiko dia nidina avy tao an-davaka izy ireo nefa tsy mila miezaka akory? Tsy rariny izany! »
Tsia, tsy "tsy miangatra" ny fahasoavana, fahasoavana io, fanomezana tsy mendrika. Afaka malala-tanana Andriamanitra amin'izay tiany halala-tanana, ary ny vaovao mahafaly dia manolotra ny fahalalany amin'ny olona rehetra. Ara-drariny raha ny hevitry ny rehetra dia eo ihany ny olon-drehetra, na dia midika aza izany fa mametraka trosa be izy amin'ny sasany ary kely kokoa ho an'ny hafa - mitovy ny fepetra ho an'ny rehetra, na dia hafa aza ny zavatra takiana.
Fanoharana momba ny tsy miangatra sy ny tsy miangatra
Ao amin’ny Matio 20 dia misy ny fanoharana momba ny mpiasa tao amin’ny tanimboaloboka. Ny sasany nahazo tsara izay nifanarahany, ny sasany nahazo bebe kokoa. Hoy ireo lehilahy niasa nandritra ny tontolo andro: “Tsy rariny izao. Niasa nandritra ny tontolo andro izahay ka tsy rariny ny karamanay mitovy amin’ireo izay niasa kely kokoa » (jereo and. 12). Na izany aza, ireo lehilahy izay niasa nandritra ny tontolo andro dia nahazo tsara izay nifanarahany talohan’ny nanombohany niasa (and 4). Nimenomenona fotsiny izy ireo satria nahazo mihoatra noho ny tokony ho izy ny hafa.
Inona no nolazain'ny tompon'ny tanimboaloboka? «Tsy manana fahefana hanao izay tiako amin’izay ahy ve aho? Toa mahaliana anao ve satria tsara fanahy aho?" (V. 15). Nilaza ny tompon’ny tanimboaloboka fa homeny karama isan’andro isan’andro izy ireo, mba hanaovana izany isan’andro, ary nanao izany izy, nefa nitaraina ireo mpiasa. Nahoana? Satria nampitahaina tamin’ny hafa izy ireo ary tsy dia nankasitrahana. Nampiakatra ny fanantenany izy ireo ary diso fanantenana.
Hoy anefa ny tompon’ny tanimboaloboka tamin’ny iray tamin’izy ireo: “Tsy manao izay tsy rariny aminareo aho. Raha heverinao fa tsy rariny izany, ny olana dia eo amin'ny andrasanao, fa tsy amin'izay tena azonao. Raha tsy nandoa be loatra tamin’izay tonga taty aoriana aho dia ho afa-po amin’izay nomeko anareo. Ny zavatra antenainao no olana fa tsy izay nataoko. Ampangainao ho ratsy fanahy aho noho ny nanaovako soa tamin’ny hafa” (and. 13-15).
Ahoana no ho fihetsikao manoloana izany? Ahoana ny hevitrao raha nomen'ny mpitantana anao tombony ny mpiara-miasa vaovao fa tsy ny mpiara-miasa taloha sy mahatoky? Tsy mety amin'ny morale izany, sa tsy izany? Tsy bonus anefa no resahin’i Jesosy eto fa ny fanjakan’Andriamanitra no resahiny amin’ity fanoharana ity (and. 1). Misy taratry ny zava-nitranga teo amin’ny fanompoan’i Jesosy ilay fanoharana: Nomen’Andriamanitra famonjena ny olona tsy niezaka mafy, ary nilaza toy izao ireo manam-pahefana ara-pivavahana: “Tsy rariny izany. Tsy afaka ny ho malala-tanana amin'izy ireo ianao. Niezaka mafy izahay ary zara raha nanao na inona na inona izy ireo. " Ary Jesosy namaly hoe: “Mitondra ny filazantsara amin’ny mpanota Aho, fa tsy amin’ny marina”. Nandrahona ny hanimba ny antony ara-dalàna ho tsara ny fampianarany.
Inona no ifandraisan'izany amintsika?
Mety te hino isika fa rehefa mahazo miasa mandritra ny andro sy mitondra ny enta-mavesatra sy ny hafanana, dia mahazo valisoa tsara isika. Izahay dia tsy. Tsy maninona na firy akory ianao no tany am-piangonana na firy na sorona izay nataonao; tsy misy izany raha oharina amin'ny omen'Andriamanitra antsika. Nanao ezaka bebe kokoa noho isika rehetra i Paoly; nanao sorona bebe kokoa ho an'ny filazantsara izy mihoatra ny takatsika, saingy nataony ho fatiantoka ho an'i Kristy izany rehetra izany. Tsy inona izany.
Tsy ho an’Andriamanitra ny fotoana lanintsika any am-piangonana. Ny asa vitantsika dia tsy manohitra izay azony atao. Na dia eo amin’ny tsara indrindra aza isika, dia mpanompo tsy mahasoa, hoy ny fanoharana hafa (Lio. 17, 10). Jesosy nividy ny fiainantsika manontolo; manana ny rariny izy amin’ny eritreritra sy ny atao rehetra. Tsy misy fomba ahafahantsika manome azy mihoatra noho izany - na dia manao izay rehetra didiny aza isika.
Raha ny tena izy dia toy ny mpiasa izay tsy miasa afa-tsy adiny iray isika ary mahazo karama iray andro. Zara raha nanomboka isika ka nahazo karama toy ny hoe efa nanao zavatra mahasoa. Rariny ve? Angamba tsy tokony hapetrakay mihitsy ilay fanontaniana. Raha ankasitrahantsika ny didim-pitsarana, dia tokony tsy mitady hevitra faharoa isika!
Moa ve isika mahita ny tenantsika toy ny olona niasa mafy sy niasa mafy? Mihevitra ve isika fa nahazo mihoatra noho izay azontsika? Na hihevitra ny tenantsika ho toy ny olona nahazo fanomezana tsy mendrika, na firy taona isika no niasa? Izany dia sakafo ho eritreretina.